Maxaad kala socotaa musharaxiinta ay kala taageerayaan madaxda maamulka goboleedyada? - iftineducation.com
Maxaad kala socotaa musharaxiinta ay kala taageerayaan madaxda maamulka goboleedyada?
iftineducation.com – Inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka oo shalay illaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa door weyn ka cayaaraya ololaha doorashada madaxweyne ee ka socda caasimada dalka.
Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas oo Axaddii yimid Muqdisho ayaa ilo ku dhow sheegayaan inuu taageerayo Murashaxnimada Cumar C/rashiid.
Gaas ayaa la sheegay inuu dhaqaale ku taageerayo Ololaha Cumar C/rashiid isagoo u gudaya taageeradii uu siiyey xiligii uu Gaas u tartamayey madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Maamulka K/Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna la soo weriyey inuu taageerayo Musharax Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dib markii ay Dowladda Itoobiya arintaas ku qancisay, waxaana xusid mudan in shariifku uu taageerayaal badan ku leeyahay Baarlamanka.
C/kariin Xuseen Guuleed Madaxweynaha Galmudug waxaa uu muddo dheer saaxiib dhow la ahaa Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna labadooda ka yimaadeen hal xisbi Siyaasadeed, waxaana la sheegay inuu Madaxweyne Xasan gacan ku lahaa sidii Guuleed ugu guuleysan lahaa Madaxweynaha Galmudug, waxaana taas bedelkeed la filayaa inuu markiisa taageero siiyo saaxiibkii Xasan Shiikh.
Xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Galmudug ayaa ka walaacsan doorka C/kariin Xuseen Guuleed ka qaadanayo Ololaha Xasan Sheekh iyo inuu ku bixinayo miisaaniyadii loogu talagalay Horumarinta Galmudug oo xiligan ay ka jiraan abaaro daran.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle, Cali C/llaahi Cosoble waxaa uu sheegaa inuu taageersan yahay Xasan Shiikh, balse warar ayaa sheegaya inuu si qarsoodi ah u taageerayo Cumar C/rashiid.
Murashax Farmaajo ayaa loo arkaa inuu yahay Murashaxa keliya ee aan wax taageero ah ka helin mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyada marka la eego musharaxiinta kale ee ugu cad cad.
Axmed Madoobe madaxweynaha Juballand waxaa uu horey fagarayaal badan uga sheegay inuusan taageeri doonin musharax gaar ah, balse masuuliyiin isaga wakiil ka aheyd oo maanta soo gaartay Muqdisho ayay wararku sheegayaan iney kulan albaabadu u xiran yihin la qaateen musharax Shiikh Shariif.
Shariif iyo Madoobe ayaa ah saaxiibo isku dhow maadaama ay ka wada tirsanaayeen hogaamiyeyaashii ugu sareeyey midowgii burburay ee maxkamadaha Islaamka ee sanadkii 2005 ka jiray qeybo ka mid ah Somalia.
Xasan Shiikh oo galabta soo bandhigay dhoolatuskii ugu weynaa ee ololahiisa doorashada (Daawo Sawirro)
War Deg Deg ah: Duqeymo xooggan oo goor dhow ka dhacay Muqdisho, xili amniga la xoojiyey